Toyota - Toyota Crown 2008 Made in Japan ကားအပိုပစ္စည်း ၊ Model မြင့် ကားအလှဆင်ပစ္စည်း - Myanmar Car Search Engine
Toyota Crown 2008 Made in Japan ကားအပိုပစ္စည်း ၊ Model မြင့် ကားအလှဆင်ပစ္စည်း , 4WD & SUV ကားအလှဆင်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး ရောင်းဝယ် ရေး နယ်orderများအတွက် ကားဂိတ်မှတဆင့်ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဖုန်းဖြင့်မှာယူလိုပါက - 0973084018 , 09425314836 ............................ ဝယ်ယူအားပေးသောမိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များအား Nihon Auto မှအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ Hot Line - 0973084018 ဆိုင်လိပ်စာ - အမှတ် ၄၆,ဗညားဒလလမ်း,မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်။ Office Ph : 09 425314836
◄ ရှေ့သို့ ◄: Toyota Harrier 2014 Head Lamp Grille Made in Japan ကားအပိုပစ္စည်း ၊ Model မြင့် ကားအလှဆင??
နောက်သို့ ►: အမြန်ရောင်းမည် Toyota ist 2009 ရောင်းပါမယ် ရန်ကုန် လိုင်စင် 5F/.... ? ►
Saloons car ဆိုသည်မှာ ဆလွန်းကားများကို စုပေါင်း ခေါ်ဝေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ Large family ကားများ၊ Full size ကားများ၊ Crossover ကားများ၊ Minivans ကားများ ပါဝင်ပါသည်။ ဥပမာ- Chevrolet Malibu, KIA optima, Toyota Avalon, Tata Aria, Nissan Note ကဲ့သို့ ကားများ ပါဝင်ပါသည်။
Do you use Ooredoo Myanmar ?